Ciidamada amniga Galkacyo oo wado hawl-gallo amni adkayn ah iyo dilalka qorshaysan oo aan wali joogsan. – Radio Daljir
Galkacyo, June 29 – Ciidamada nabad-galyada ee magaalada Galkacyo ayaa xalay bilaabay hawl-gallo la xiriira amniga kaasoo laga waday inta badan xaafadaha magaalada Galkacyo, laguna hubinayey dadka iyo gaadiidka.
Hawl-galladaan oo lagu tilmaamay adkaynta iyo xoojinta amniga ayaa u badnaa baaritaanno dheeraad ah oo lagu samaynayey dadka iyo gaadiidka waddooyinka maraya si loo hubiyo agabka ay wadaan iyo ujeedooyinkooda socod.
Intii ay socdeen hawl-galladaasi baaritaannada xambaarsanaa ee xalay waxaa lagu qab-qabtay dad bilayska ay sheegeen in looga shakiyey ku lug-lahaansha falalka amni darro ee magaalada.
Inkastoo in muddo ah maamulka iyo saraakiisha amniga ee gobolka Mudug ay tilmaamayeen in la laban-laabay tallaabooyinka amniga lagu adkayeynayo haddana wali Galkacyo kama hakan falalkii amni darro ee u badnaa dilalka qorshaysan.
Dhinaca kale inta madaxdii maamulka gobolka Mudug iyo qaar ka mid ah saraakiishii ciidanka bilayska ee isla gobolka ayaa dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey ku sugnaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, waxaana la tilmaamayaa joogitaankooda Garoowe in uu salka ku hayo qorshe wax looga baddalayo xaaladda gobolka Mudug oo muddo amni xumo xooggani ay haraysay.